Bartimäus - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Bartimeo
Tian'ny ankizy ny tantara satria manaitra sy miharihary izy ireo. Mampihomehy sy mitomany ary mampianatra lesona antsika izy ireo amin'izay ary mitaona ny fitondran-tenantsika. Ireo evanjelista dia tsy naneho fotsiny hoe iza i Jesosy - nitantara tamintsika ny zavatra nataony sy ny olona nihaona taminy izy satria betsaka ny azo ambara momba azy.
Andeha hojerentsika ny tantaran’i Bartimeo. « Ary tonga tany Jeriko izy. Ary nony niala tao Jeriko Izy mbamin’ny mpianany mbamin’ny vahoaka betsaka, dia nisy mpangataka jamba nipetraka teo amoron-dalana, dia Bartimeo, zanak’i Timeo, » (Mar. 10,46).
Voalohany indrindra, dia aseho amintsika fa fantatr’i Bartimeo izay nilainy. Tsy niezaka niafina izy fa “nikiakiaka” (and. 47).
Isika rehetra dia samy manana izay ilain'ny Mpamonjy sy Mpamonjy antsika, Jesosy, ihany. Mazava ny filàn'i Bartimeo, fa ho an'ny ankamaroantsika dia takona ny filantsika na tsy afaka ary tsy te hanaiky izany isika. Misy faritra eo amin'ny fiainantsika izay tokony hitalahoantsika ny fanampian'ny Mpamonjy. Mamporisika anao i Bartimeo hanontany tena hoe: Vonona ny hiatrika ny filanao sy hangataka fanampiana toa azy ianao?
Nisokatra tamin’ny filany i Bartimeo ary io no niandohan’ny nanaovan’i Jesosy zavatra lehibe ho azy. Fantatr’i Bartimeo tsara hoe iza no afaka hanampy azy, ka nanomboka niantsoantso izy hoe: “Ry Jesoa, Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko!” ( Andininy 47 ), misy anarana hoe Mesia. Fantany angamba izay nolazain’i Isaia hoe: “Dia hampahiratina ny mason’ny jamba sy ny sofin’ny marenina.” ( Isaia 3 Kor.5,5).
Tsy nihaino ny feo nilaza taminy izy fa tsy mendrika ny hanahirana ny Mpampianatra. Tsy azo nampangina anefa izy, satria fantany fa vao mainka tokony hiantsoantso hoe: “Ry Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko!” (Markus 10,48). Nijanona i Jesoa ka nanao hoe: Antsoy izy! Isika koa dia tian’Andriamanitra, mijanona izy rehefa mandre ny fitarainantsika. Fantatr’i Bartimeo ny zava-dehibe sy ny tsy manan-danja. Mahaliana fa tao amin’ilay tantara, dia nandao ny akanjony izy ka nirohotra nankany amin’i Jesosy (andininy 50). Sarobidy taminy angamba ny akanjony, nefa tsy nisy nahasakana azy tsy hanatona an’i Jesosy. Inona avy ireo zavatra eo amin’ny fiainanao izay tsy dia zava-dehibe loatra nefa sarobidy loatra? Inona avy ireo zavatra tokony hafoinao mba hanatonana an’i Jesosy?
« Hoy Jesosy taminy: Mandehana, ny finoanao no nahasitrana anao. Ary niaraka tamin’izay dia nahita izy ka nanaraka Azy teny an-dalana » (and52). Ny finoana an’i Jesoa Kristy no mahatonga anao hahita ara-panahy, manasitrana anao amin’ny fahajambana ara-panahy ary mamela anao hanaraka an’i Jesosy. Rehefa nositranin’i Jesosy i Bartimeo, dia nanaraka Azy teny an-dalana izy. Te hiara-mandeha amin’i Jesosy izy ary ho anisan’ny tantarany na taiza na taiza nitondrana azy.
Isika rehetra dia toa an'i Bartimeo, jamba, sahirana ary mila ny fanasitranan'i Jesosy. Andao hatsahatra izay tsy zava-dehibe ary avelao Jesosy hanasitrana antsika ary hanaraka azy amin'ny diany.